Wax ogow 9 Xaqiiqo oo islamka ku saabsan oo la yaab leh oo ayna dadka Muslimka ahi waxba ka Ogeyn – Xeernews24
Wax ogow 9 Xaqiiqo oo islamka ku saabsan oo la yaab leh oo ayna dadka Muslimka ahi waxba ka Ogeyn
9. Oktober 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Qormadan kooban oo ku xidhiidhsan qormooyinkeennii xaqiiqooyinka layaabka leh ee dunida waxa aan ku eegi doonaa 9 xaqiiqo oo ah macluumaad layaab leh oo aanay in badani ka war qabin oo ku saabsan islaamka iyo muslimiinta. Waxaanay 9-kaa xaqiiqo oo aad ka faa’iidi doonto macluumaad wanaagsani kala yihiin:
1. Islaamku waa diinta labaad ee adduunka wakhtigan ugu weyn ee ay haystaan dadka labaad ee adduunka ugu tiro badani waxaana kaliya adduunka kaga tiro badan dadka haysta Masiixiga iyo diin laawayaasha oo la isku daray, waxaana lagu tilmaamaa Islaamka diinta ugu fiditaan weyn dacallada adduunka.
2. Sannadkan innagu soo aaddan ee 2017 waxa la filayaa in tirada dadka Muslimiinta ahi la sinnaato ama gaadhaan tirada dadka Masiixiyiinta ah ee adduunka ku nool sannado koobanna ay iyagu ka bataan oo dhaafaan marka loo eego taranka iyo xawaaraha ay ku tarmayaan dadka islaamka ahi.
3. Ma Og tahay Akhristow in Magaca Maryama Al Cadraa, Qur’aanka Kariimka ah lagu soo qaaday oo lagu xusay in ka badan inta lagu xusay kitaabka Injiil ee Kiristaanka.
4. Bisadaha Waxa lagu tilmaamaa xayawaan u dhaw Islaamka iyo Muslimiinta shareecadana in badan lagu xuso maadaama rasuulku soo dhawayn jiray in ka badan xayawaanada kale ee dad la joogta ah.
5. Masjid Jaamaca weyn ee ku yaalla Magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska waxa lagu xasuustaa in uu badbaadiyey Yuhuud fara badan oo ka soo yaacaysay xasuuqii Naasiga Jarmalku ku hayay kadib markii la siiyey kaadhadh Muslimiintu leedahay oo ay ku dhuunteen Masaajidkaasi wakhtigii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku. Kuna badbaadeen in badan oo Yuhuud ahi.
6. Wakhtiyadii Dahabiga ahaa taariikhda Islaamka culimadii iyo dadkii kutubta islaamka qori jiray ama dadka bari jiray intooda badani waxa ay qaadan jireen lacago ka badan inta ay maanta qaataan dadka caanka adduunka ka ahi sida ciyaartoyga, jilayaasha iyo fannaaniintu
7. Ubadkii Hore ee Islaamka ahaa waxa ay ku ciyaari jireen casriyadii dhexe ee taariikhda islaamka madaamad (Caruusad) ka caansan madaamadda maanta adduunka ugu naacsan ee loo yaqaano BARBIE ee ubadka adduunka oo dhammi yaqaanaan kuna ciyaaraan.
8. Ma Ogtahay Akhristow in tiro badan oo Muslimiin ah oo doonaysay in ay badbaadiyaan Yuhuud fara badan dagaalkii labaad ee adduunku ay u dhintaan badbaadintaasi darteed oo ahayd mid bani aadamnimo halka ay maanta Yuhuuddu ka layso ubadka yaryar ee Muslimiinta.
9. Dalka Indonesia waxa uu yahay kan ugu badan tirada dadka Muslimiin ah ee maanta adduunka ku nool. Waxaana lagu qiyaasaa in ka badan 250-Malyuun oo qof.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/images7145LA6M.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-09 09:55:292016-10-09 09:55:29Wax ogow 9 Xaqiiqo oo islamka ku saabsan oo la yaab leh oo ayna dadka Muslimka ahi waxba ka Ogeyn
Madaxweynaha Galmudug oo sheegay Gaalkacyo inaysan labo Maamul ka wada tali... Itoobiya: Xakuumada oo ku dhawaaqday Lix bilood oo Xaalad Degdeg ah..